ဇဒ္ဒုကဲများနှင့် ဒဏ္ဍာရီများ - အရှင်ဘုရား Michael Avraham
တုံ့ပြန်မှု > အမျိုးအစား- ယုံကြည်ခြင်း > ဇဒ္ဒုကဲများနှင့် ဒဏ္ဍာရီများ
မင်္ဂလာပါ Joseph လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က မေးတယ်။
သူတို့၏စိတ်များသည် ပညာရှိများ၏ ညွှန်ကြားချက်ကို လက်မခံဘဲ တိုရှဝကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ငြင်းပယ်ရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်။
သူတို့ကို လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ နိယာမက မင်းကို လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ နိယာမပဲ မဟုတ်လား ။
ဇဒ္ဒုကဲများနှင့်ပတ်သက်သော ဖာရိရှဲများ၏သွန်သင်ချက်သည် သင့်နားလည်မှုအတွက် အမှန်တကယ်ပင် အခြားသောပညာရှိအမှားတစ်ခုလော။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် Talmud တွင် အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းကို ခံရသည် (ယခုအချိန်အထိ ကျွန်ုပ် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေသော အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့်)
စနေနေ့တွင် လေအေးပေးစက်ဖွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ကော်ဖီအတွက် ရေနွေးပူပူကို ပွက်ပွက်ဆူအောင်ဖွင့်ခြင်းမှာ ပြဿနာမရှိကြောင်း သာမာန်အသိက အဘယ်ကြောင့်ဆိုသနည်း။
Talmud နှင့် ခုံသမာဓိလူကြီးများရှေ့တွင် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း ၊ ဟုတ်သည် နှင့် မဟုတ်သည် ဟူသော လေပွေတစ်မျိုး ခံစားရပြီး ကွဲပြားရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းမှာ အဘယ်နည်း။
မင်းရဲ့ဆောင်းပါးတွေမှာ တွေ့ခဲ့ရတာတွေကို ငါတကယ်ရှက်ရွံ့မိလို့ ငါရှင်းပြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
သူတို့ကို လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ နိယာမက ငါ့ကို လမ်းညွှန်ပေးရင် ငါက ဇဒ္ဒုကဲနဲ့ ဘေတုသိ။ သင့်တွင် တိကျသောမေးခွန်းတစ်ခုရှိပါက၊ ဤနေရာတွင် ၎င်းကိုထည့်သွင်းပြီး အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပါ။
မင်္ဂလာပါ Joseph လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
နင်က ဇဒ္ဒုကဲလို့ ငါမပြောခဲ့ဘူး၊
1. ထိုသို့သောချဉ်းကပ်မှုသည် ဇဒ္ဒုကဲချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပြီး၊ Torah ၏အကျင့်စာရိတ္တဆရာများမှ မျိုးဆက်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ဆင်းသက်လာသော အယူအဆများ/ ဥပဒေများ/ အခွင့်အာဏာများကို လက်ခံခြင်းကင်းမဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊ မှော်ပညာလေ့လာလိုသော Ger အား Hillel ကပြောသည်]
2. သင်ဟာ halakhic အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ရှေးရိုးဆန်သူလို့ ယူဆရပါတယ်။
ဓားထက်ထက်နဲ့ ဘယ်လိုခုတ်ရမလဲဆိုတာ ရိုးရာဓလေ့အရ လက်ခံရမလား။
အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ Masoretic Text တွင် ပထမအခွင့်အာဏာကို သင်ဖြတ်သည့်နည်း၊ ထို့ကြောင့် ဇဒ္ဒုကဲများသည် Masoretic Text တွင် ဖာရိရှဲများကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊
ဖာရိရှဲများ မှန်ကန်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့သိနိုင်သနည်း။
ဖာရိရှဲတွေရဲ့ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက် သက်သေရှိသလား ဒါမှမဟုတ် လောင်းကစားရုံပဲလား။
ק လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
Kamilta Debdihuta သည် သင်၏ Wikipedia ထည့်သွင်းမှုကို တည်းဖြတ်ပြီး သင်သည် Sadducee နှင့် Beitusi ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သက်သေပြရန် တောင်းဆိုသင့်သည်။
ထိုအချိန်က ရဗ္ဗိဿိတနှင့် ပတ်သက်၍ ရဗ္ဗိတစ်ဦးနှင့် ငြင်းခုံနေကြသော AP သည် အမျိုးအနွယ်အဆက်အနွယ်အတွက် အခွင့်အာဏာမရှိဟု သင်ပြောနေသမျှ ကာလပတ်လုံး အလုံးစုံသော အခွင့်ရှိလျှင်ပင်၊ သင်ကိုယ်တိုင်မူ ဆယ့်သုံးပုဒ် ပါ၀င်သည် ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အယူအဆ၏ တစ်ဆယ့်သုံးပါးသော အစိတ်အပိုင်းသည် အစဉ်အလာဖြစ်သည်။ တခြားသူတွေက ငါ့ထက် ဉာဏ်မမီဘူးဆိုတာ နားလည်ပါ...
ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေရော ရဗ္ဗိတွေကိုပါ လုံးဝမဆွေးနွေးပါဘူး၊ အတန်းတွေဝေဖို့ မအားပါဘူး၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်၊
သူ့ရဲ့ချဉ်းကပ်ပုံနဲ့ ဇဒ္ဒုကဲတွေရဲ့ ချဉ်းကပ်ပုံကြားက ခြားနားချက်ကို နားလည်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။
Torah ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားသမားများကြားတွင် မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာ Torah ၏ သာသနာတော်သို့ ကူးပြောင်းခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အစစ်အမှန်ကို ရရှိနေသည့် အရာတစ်ခုဖြစ်သည် [ကျွန်ုပ်တို့သည် သိပ္ပံနည်းကျ အချက်အလက်များနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ] ကျွန်ုပ်အား ခိုင်းစေသော "တရားဝင်" ဟူသော အခွင့်အာဏာရှိပါသလား၊ မျိုးဆက်များတစ်လျှောက် Torah ၏ကိုယ်ကျင့်တရားများ
ငါရေးထားတဲ့ Torah ကိုတောင် ငါဘယ်လိုလက်ခံနိုင်မလဲလို့ တွေးမိတယ်၊ အဲဒါကို ငါ လက်မခံတဲ့သူတွေက ပေးထားတာဆိုတော့၊
ငါသည် ဇဒ္ဒုကဲဖြစ်သည်ဟု ငါမပြောခဲ့။ ကျွန်ုပ်သည် ဇဒ္ဒုကဲ ဟုတ်၊ မဟုတ်၊ ငြင်းခုံခြင်းသည် ကျွန်ုပ်အတွက် အရေးမကြီးကြောင်းကို ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည်။ မေးခွန်းက ဘယ်ဟာက မှန်တယ်၊ ဘယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ မထိုက်တန်လဲ။
Sinai မှ မက်ဆေ့ချ် သို့မဟုတ် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အဖွဲ့အစည်း ( Sanhedrin ) မှ ပေးပို့သည့်အရာသည် မှန်ကန်ပြီး အစဉ်အလာတစ်ခုဖြင့် ပေးပို့ထားသော်လည်း အခြားအရာအားလုံးသည် အကျုံးမဝင်ပါ။ အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဆိုင်းနိုင်းမှ ဆင်းသက်လာသောအရာ သို့မဟုတ် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် မရရှိခဲ့သည့်အရာသည် အမြဲတမ်းရိုးရှင်းသည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ၎င်းသည် ကိစ္စရပ်တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏အကျိုးအမြတ်အတွက် ကျင်းပရန် လိုအပ်သော ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အမှန်စင်စစ်၊ မျိုးဆက်များ၏ အစဉ်အလာအရ ဖန်တီးထားသည့်အရာအတွက် အခွင့်အာဏာမရှိပေ။ အတိအကျတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းတွင် အလေးချိန်အနည်းငယ်ရှိပြီး အကောက်ခွန်ဥပဒေများရှိသည်။ ဒါပဲ။ ဘုရားသခင် သို့မဟုတ် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသာလျှင် အခွင့်အာဏာရှိသည်။ စကားမစပ်၊ ဒါက ကျွန်တော့်ရဲ့ အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်မှာ ခုံသမာဓိလူကြီးအများစု သဘောတူညီသော စည်းမျဉ်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ခဏခဏ လစ်လျူရှုတတ်ကြတယ်။
သင်နှင့် K. (သူကိုးကားသော ရဗ္ဗိဆရာလည်းဖြစ်သည်) ကျွန်ုပ်၏ပြောဆိုချက်ကို နားမလည်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ ငြင်းခုံချက်မှာ သဘောတရားအရ ဖြစ်ရပ်မှန်ကိစ္စရပ်များအတွက် အခွင့်အာဏာ မရှိပါ။ အဖြစ်မှန်အတွက်၊ သိပ္ပံနည်းကျဖြစ်စေ မဖြစ်စေသည်ဖြစ်စေ (မေရှိယကြွလာခြင်း သို့မဟုတ် လျှို့ဝှက်ပေးဆောင်ခြင်းသည်ပင်လျှင်) ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအရာမှာ ကျွန်ုပ်အား သက်သေပြသောအခွင့်အာဏာကို မတောင်းဆိုဘဲ၊ အကြောင်းမူကား ငါမယုံကြည်ပါက၊ ထိုသို့သော အနေအထားသည် အယူမှားသည်ဟု ပြောရလျှင် အဘယ်ကောင်းသနည်း။ ဒါပဲ။ အလွန်ရိုးရှင်းပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပြီး ယင်းကို သဘောမတူသူတိုင်း ရှုပ်ထွေးနေပါသည်။
ဒါကို ကျွန်တော် တော်တော် နားလည်ပုံရတယ် လို့ မေးလိုက်တယ်။
အသေးစိတ်ရှင်းပြမယ် ၊ ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုတောင် မှန်အောင်မသင်ခင် ဘယ်လိုရှိလဲ။ ဥပမာအားဖြင့် ဆုတောင်းခြင်းအမိန့်
အခွင့်အာဏာမရှိသော သူများကို အားမကိုးနှင့်။
မီချီ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
အဖြစ်မှန်အကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ ဤနေရာတွင် နားမကြားသူများ၏ ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုရှိသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် သက်သေခံချက်အဖြစ် ပေးသောအရာကို လက်ခံသော်လည်း၊ "မိမိကိုယ်ကို ထင်မြင်ချက်" အဖြစ် ပေးသည်ကို လက်မခံပါ။
ပြီးတော့ ဒီမှာ ရှက်တယ်။
အာယတ်တော်များမှ ပညာရှိများအားလုံး၏ တရားဒေသနာများသည် သက်သေခံခြင်းမဟုတ်သော်လည်း “မိမိကိုယ်ကို ထင်မြင်ချက်” ဖြစ်သည်၊
Chazal သည် အာဏာရှိသူဟု ဆိုပါက၊ ၎င်းသည် Manlan ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် Torah ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များကို ယနေ့ထိတိုင် မိမိကိုယ်မိမိ ထင်မြင်ချက်မဟုတ်ပေ။
ဒီမှာအဆုံးသတ်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဘာအကြောင်းမှ မသိတဲ့အခါ ခက်ခဲစေတယ်။
ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ တိကျတဲ့အချက်တစ်ခုရှိလို့ သင်နားမလည်ဘူးလို့ထင်ရင် ကျေးဇူးပြုပြီး (အရင်းအမြစ်တစ်ခုအပါအဝင်) ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးပြီး ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏နည်းလမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယေဘူယျထုတ်ပြန်ချက်မရှိဘဲ သင်မသိကြောင်း သိသာထင်ရှားစွာမေးပါသည်။